Golaha wasiiradda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday hanti dhowraha guud - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGolaha wasiiradda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday hanti dhowraha guud
Golaha wasiiradda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday hanti dhowraha guud
May 4, 2017 Abdi Omar Bile Somalia Comments Off on Golaha wasiiradda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday hanti dhowraha guud
Hanti dhowraha guud ee xilka laga qaaday Nuur Faarax Jmcaale. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah xilkii ka qaaday hanti dhowraha guud Nuur Faarax Jimcaale hal maalin kadib markii ilaaladiisu ay Muqdisho ku dileen Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u Dhiska dowladda federaalka Soomaaliya.
Cabbaas Cabdulaahi Siraaji ayaa xalay lagu dilay gudaha Muqdisho markii ilaalada hanti dhowraha guud ay rasaas ku fureen gaari uu saarnaa wasiirku.
Gelinkii hore ee maanta oo Khamiis ahayd, ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa labo katirsan ilaalaada hanti dhowraha guud u xiray dilka Siraaji.
Meydka Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u Dhiska dowladda federaalka Soomaaliya Cabbaas Cabdulaahi Siraaji ayaa lagu aasay gudaha magaalada Muqdisho maanta oo Khamiis ah.
July 28, 2017 Ugu yaraan hal qof oo ku dhintay isku dhac ka dhashay bandhig faneed ay Fartuun Birimo ku qabatay koonfurta Gaalkacyo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Miinada dhulka lagu aaso ayaa ugu yaraan 18 qof oo shacab ah ku dishay deegaanka Lafoole oo u dhow caasimada Soomaaliya, Muqdisho, sida ay sheegeen booliska. “Dhamaan 18 qof oo gaari bas [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirweynihii Qaran ee Hanaanka Dib-u-heshiisiinta Soomaaliya ayaa shalay oo Sabti ahayd lagu soo gabagaboobay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Shirweynahan Qaran waxaa ka soo qayb galay ergo matalaysey dadka Soomaaliyeed oo ka kala [...]